ဘေဘီလေးက ဂေါ်လီလုံး မျိုချမိတဲ့အခါ - Hello Sayarwon
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 04/08/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ဘေဘီလေးတွေ အများဆုံး လုပ်လေ့ရှိတဲ့ အလေ့အထ တစ်ခုက ဘာဖြစ်မယ် ထင်လဲ…….. ဘေဘီလေးတွေ အများဆုံး လုပ်တတ်တဲ့ အလေ့အထလေး တစ်ခုက စူးစမ်းတာပါ။
အရာရာတိုင်းက သူတို့လေးတွေအတွက် အသစ်အဆန်း ဖြစ်နေတော့လည်း စူးစမ်းတာက အပြစ်ရယ်လို့ မဆိုသာပါဘူး။ ဒီလို စူးစမ်းတဲ့အခါ သူတို့လေးတွေ အများဆုံး သုံးကြတာက သူတို့ရဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ပါးစပ်ကိုပါ။
ဘေဘီတို့ရဲ့ စူးစမ်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်က အသစ်အဆန်း တစ်ခုတွေ့ပြီဆိုရင် အရင်ဆုံး လက်နဲ့ ကောက်ကိုင်မယ် ပြီးရင် နောက်တဆင့် ပါးစပ်ထဲ ထည့်မယ်၊ ဝါးမယ်။ ဝါးရင်း အခန့်မသင့်ရင် မျိုချမိတယ်။
ဒီလိုကနေ ဘေဘီလေးတွေ ကြယ်သီး၊ အရုပ်ပိစိလေးတွေနဲ့ ဓာတ်ခဲ၊ ဂေါ်လီ စတာတွေကို မျိုချမိကြပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ဘေဘီလေးတွေ ဂေါ်လီလုံး မျိုချမိတဲ့အခါ ဘယ်လို ဂရုစိုက်မှုတွေ လုပ်ပေးရမလဲ ဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
ဘေဘီလေးတွေ အစာမဟုတ်တဲ့ အရာတစ်ခုခုကို မျိုချမိတာက စိုးရိမ်စရာ ဆိုပေမယ့် ဒီနေရာမှာ သတင်းကောင်း တစ်ခုက မျိုချမိတဲ့ ပြင်ပ အရာဝတ္ထုတွေက အစာရေမျိုကနေတဆင့် အစာအိမ်၊ အူလမ်းကြောင်းတွေဆီ ရောက်သွားပြီး များသောအားဖြင့် ဝမ်းကနေ ပြန်ပါသွားတတ်တယ် ဆိုတာပါ။
ဂေါ်လီတွေက များသောအားဖြင့် ချောမွတ်တဲ့ ဖန်သားတွေနဲ့ လုပ်ထားတာ များပါတယ်။ ဂေါ်လီလုံးမှာ ချွန်ထက်တဲ့ အစွန်း မပါတာကြောင့် ကလေးရဲ့ နုနယ်တဲ့ အူနံရံလေးတွေကို မထိခိုက်စေနိုင်ပါဘူး။ ဂေါ်လီလုံး အများစုက ဝမ်းကနေတဆင့် ပြန်ပါလာတတ်ကြပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ စိတ်ရှည်ဖို့တော့ လိုပါမယ်။ ဒါပေမယ့် သတိထားရမှာ တစ်ခုက ဝမ်းထဲကနေ ပြန်ပါလာရဲ့လားဆိုတာကို သေချာလေး ဂရုစိုက်ကြည့်ဖို့ပါ။
အချို့မှာ ဂေါ်လီလုံးက ရက်အနည်းငယ် အတွင်း ဝမ်းထဲမှာ ပါလာတတ်ပေမယ့် အချို့မှာတော့ ရက်အတော်ကြာမှ ထွက်လာတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မျိုချမိတဲ့အရာက မျိုချမိပြီး ၇ ရက်ကြာတဲ့အထိ ပြန်ထွက် မလာဘူးဆိုရင်တော့ လိုအပ်တဲ့ ကုသမှုတွေကို ခံယူဖို့ လိုပါမယ်။
ဘယ်လို အခြေအနေဆိုရင် အရေးပေါ် ကုသမှု ခံယူဖို့ လိုမလဲ………
ကလေးက တစ်ခုခုကို မျိုချမိသွားတဲ့အခါ ကိုယ်တိုင် မဖယ်ရှားတတ်ဘူးဆိုရင် နီးစပ်ရာဆေးခန်းကို အမြန်ဆုံး သွားရောက်ဖို့ လိုပါမယ်။ မကျွမ်းကျင်ဘဲ လုပ်တာက အန္တရာယ် ပိုများတာကြောင့်ပါ။ တကယ်လို့ ကလေးက
အဖျားတက်မယ် ဆိုရင်တော့ အရေးပေါ် ကုသမှု ခံယူဖို့ လိုပါမယ်။
တကယ်လို့ ဂေါ်လီလုံးက ပြန်ထွက် မလာခဲ့ဘူးဆိုရင် ဂေါ်လီလုံး ရှိတဲ့ နေရာကို သိနိုင်ဖို့အတွက် X-rays ရိုက်ရပါမယ်။
တကယ်လို့ ပုံမှန်အတိုင်း ရိုက်တဲ့ X-rays မှာ ပုံရိပ် မပေါ်ဘူးဆိုခဲ့ရင် ခပ်ပျစ်ပျစ် အရည် တစ်မျိုးကို သောက်ပြီး X-rays ထပ်ရိုက်ရပါမယ်။ ကလေးရဲ့ အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစာခြေလမ်းကြောင်းထဲ ရောက်ရှိနေတဲ့ ပြင်ပအရာဝတ္ထုကို သိနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ computed tomography (CT) scan ရိုက်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လို ကုသမှုတွေ ခံယူရမလဲ……….
မျိုချမိတဲ့ ပစ္စည်း အမျိုးအစား နဲ့ ရောက်နေတဲ့ နေရာပေါ် မူတည်ပြီး ကုသမှုတွေကလည်း ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။
စောင့်ကြည့်တဲ့ ကုသမှု – မျိုချမိတဲ့ အရာ ဝမ်းကနေတဆင့် ပြန်ထွက်လာသလား ဆိုတာကို ၂၄ နာရီ စောင့်ကြည့်တာပါ။
Endoscopy – မျိုချမိတဲ့အရာကို ဖယ်ရှားဖို့ နဲ့ ထိခိုက်မိတဲ့ အတိုင်းအတာကို သိရှိနိုင်စေဖို့ အတွက် ပြွန်ပုံစံ မှန်ပြောင်းလေးနဲ့ စစ်ဆေး ကုသပေးတာပါ။
ခွဲစိတ်ကုသမှု – အချိန် အတိုင်းအတာ တစ်ခုကြာတဲ့အထိ ဂေါ်လီလုံးက ပြန်ထွက်မလာတဲ့အခါ ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူဖို့ လိုပါမယ်။
ဘယ်လို အခြေအနေမှာ ကုသမှု ထပ်မံ ခံယူဖို့ လိုမလဲ………
ကလေးက ဂေါ်လီလုံး မျိုချထားမိလို့ ကုသမှု ခံယူပြီးပြီဆိုပေမယ့် အခုလို အခြေအနေမျိုးမှာ ကုသမှုကို ထပ်မံ ခံယူဖို့ လိုပါမယ်။
ကလေးက မအီမသာ ဖြစ်နေမယ်
ဗိုက်က မခံမရပ်နိုင်အောင် အောင့်မယ်။
ဂေါ်လီလုံး အပါအဝင် ပြင်ပ အရာဝတ္ထု အတော်များများကို မျိုချမိတဲ့ ကလေး အများစုက အသက် ၃ နှစ်အောက် ဘေဘီလေးတွေပါ။
ဒါကြောင့် ဘေဘီလေးကို ဂေါ်လီ အပါအဝင် ပြင်ပ အရာဝတ္ထုတွေ မမျိုချမိစေဖို့ဆိုရင်
ကလေးကို တစ်ယောက်တည်း အချိန်အကြာကြီး ထားခဲ့တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။
ကလေးအနီးတဝိုက်မှာ မျိုချမိနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို မထားပါနဲ့။
ကလေးလက်လှမ်းမီတဲ့နေရာတွေမှာ ပစ္စည်းတွေ ထားတာမျိုးကို ရှောင်ပါ။
အိမ်ကို သန့်ရှင်းအောင် ထားပါ။
Foreign object swallowed: First aid https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid/basics/art-20056707 Accessed Date2July 2021
When Your Child Swallows An Object https://www.saintlukeskc.org/health-library/when-your-child-swallows-object Accessed Date2July 2021
My Kid SwallowedaMarble! Should I Worry? https://parenting.network/my-kid-swallowed-a-marble/ Accessed Date2July 2021